Guddoomiyaha maxkamadda degmada Hodon oo iskadiiday Wareegto…
By axadle On Jul 27, 2020
Guddoomiyaha Maxkamadda degmada Hodon ee gobolka Banaadir garyaqaan Axmed Cabdi Cali (Aabi) oo soosaaray qoraal ka kooban laba bog ayaa iskadiiday go’aan ku soo baxay wareegtada Summaddeedu tahay MS/XG/75/2020, kuna taariikheysa 22-July-2020 taas oo uu soosaaray guddoomiyaha maxakamadda sare garyaqaan Baashe Yuusuf Axme, Wareegtadan oo ujeedadeedu tahay iskubeddel guddoomiyeyaal iy garsoorayaal degmo ayaa heerka guddoomiyaha maxkamadda degmada Hodon garyaqaan Axmed Cabdi Cali-Aabi hoos loogu dhigay iyada oo Wareegtada uu soosaaray guddoomiyaa Maxkamadda sare loogu magacaabay Aabi in uu garsoore ka noqdoo maxkamadda degmada Cabdicasiis, iyada oo xilka guddoomiyah amaxkamadda degmada Hodonna loo magacaabay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed.
Axmed Cabdi Cali (Aabi) oo Saddex maalin kaddib wareegtada maxkamadda sare soosaaray qoraal uu iskudifaacay ayaa sheegay in guddoomiyahago’aanka maxkamadda sare yahay meel kadhac iyo Sharci-darro baal marsan xeerka iyo Shuruucda garsoorka dalka, sidaas awgeedna aan saameyn ku lahayn habka gudahashada Waajibkiisa.
Bilihii April & May-2020 Muuse Macallin Maxamed; guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Maxdamadda gobolka Banaadir iyo guddoomiyaha Maxkamadda sare waxa dhexmar yooyootan iy dood dheer oo gaartay heer garyqaan Baashe shaqada ka joojiyey garyqaan Muuse Macallin Maxamed, Khilaafka labada guddoomiyey waxa uu salka ku hayey awoodda, Maamulka, Dhaqaalaha & cidda jaangoyneysa Khidmadaha gal-dacwadeedyada maxkamadda gbolka! hayeeshee Khilaafkaasi waxa uu ku soo dhammaaday go’aanka Wareegto uu soosaaray madaxweyne Farmaajo, kaas oo xilka looga qaaday labadii guddoomiye ee Maxkamadaha gobolka & Racfaanka.
Sida ay Axadle u sheegeen Garyaqaano iyo garsoorayaal kaladuwan oo katirsan garsoorka Soomaaliya Axmed Cabdi Cali (Aabi) guddoomiyaha Maxkamadda Hodon waxa uu kamid ahaa garyaqaanadii la shaqeynayey ama taageersanaa Muuse Macallin kuwaas oo aad u difaacay Muuse sidaas awgeed waxa ay sheegeen in guddoomiyaha maxkamadda sare isaga oo dabajooga dhacdadaas hore uu iskudayeyo in uu hoos u dhigo xilka iy derajada dhammaan garsoorayaasha iyo qareenada la shaqeeyey Muuse Macalin.
Axmed Aabiwaxa uu kamid ahaa garsoorayaal uu Hogamiye Xasan Sheekh mu magacaabay xeer madaxweyne 100 oo soo baxay Sep-216.